छानबिन समितिले दार्चुला घटना बारे यस्तो निकाल्यो निष्कर्ष - खबरदार न्युज
छानबिन समितिले दार्चुला घटना बारे यस्तो निकाल्यो निष्कर्ष
१५ भदौ, काठमाडौं । छानबिन समितिले दार्चुलामा तुइनबाट नेपाली नागरिक महाकाली नदीमा खसेको घटना भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम संयोजकत्वको छानबिन समितिले ब्याँस गाउँपालिका- २ का जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेको घटना भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीको उपस्थितिमा भएको निष्कर्ष निकालेको हो । छानबिन समितिले एसएसबीको संलग्नतामा पुन: अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताएका छन् ।
‘समितिले उक्त घटना भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा घटेको देखिएकोले निजहरुको संलग्नता सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कानूनी कारबाही गर्न र जयसिंह धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न साथै आश्रित परिवारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको व्यवस्थापन गर्न सिफारिश गरेको छ’ पोखरेलले मंगलबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
गत साउन १५ गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिका– २ का जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए । प्रत्यक्षदर्शीले भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको डोरी काटिदिएका कारण उनी नदीमा खसेको बताएका छन् ।
सरकारले यस विषयमा छानबिन गर्न साउन १७ गते सहसचिव गौतमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
Previous post एमालेको अभिलेखबाट माधव नेपालको नाम हटाइने
Next post दु:खद खबर: अन्ततः कलाकार निशा घिमिरेको नि’धन ! जानकारीको लागि सेयर गर्नुहोला।
Previous post:एमालेको अभिलेखबाट माधव नेपालको नाम हटाइने
Next post:दु:खद खबर: अन्ततः कलाकार निशा घिमिरेको नि’धन ! जानकारीको लागि सेयर गर्नुहोला।
घर बनाउदा लागेको ऋण तिर्न बिदेश हिडेका धामिलाइ भारतिय सेनाले तुइनको डोरि का’टेर नदिमा झार्यो : घरपरिवारको बिच’ल्ली ! (13,209)
आर्थिक आव्हान खोल्ने सम्बन्धि तुर्माखाँद गाउँपालिका अछामको सुचना । (4,480)